03. Al-baqarah 30 - 57
DHAGEEYSO:- Wararkii ugu dambeeyay safarkii madaxweynaha Soomaaliya uu ugu amba baxay magaalada Marka.
on September 03 2013 Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helaayaa safarkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu horkacaayay ay maanta ugu amba baxeen magaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa oo maanta safar dhulka ah uga amba baxay magaalada Muqdisho ayaa goordhaweyd gaaray magaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose waxaana halkaasi loogu soo dhaweeyay si aad u heersareeysa.
C/qaadir Maxamed Nuur Sidii oo ah gudoomiyaha gobalka Sh/hoose ee dowladda Soomaaliya oo goordhaw la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa faah faahin ka bixiyay safarka wafdiga madaxweyanaha uu horkacaayo, waxaana uu sheegay in magaaalada Marka ay soo gaareen wafdiga madaxweynaha uu hokacaayo, isagoona sheegay in si aad u heer-sareeyso halkaasi loogu soo dhaweeyay.
Gudoomiye Siidii ayaa sidoo kale sheegay in wafdiga madaxweynaha ku wehlinaayo safarkiisa ay ka mid yihiin wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya, C/kariin Xuseen Guuleed, Wasiirka gaashaandhiga C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, Wasiirka garsoorka iyo cadaalada arimaha diinta C/laahi Abyan Nuur, Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiil.
Waxaa haatan socota soo dhaweynta iyo dabaaldega lagu soo dhaweeynaayo madaxweynaha iyo wafdigiisa, waxaana saacadaha soo socdo la filayaa in madaxweyanah uu kulamo la qaato mas'uuliyiinta halkaasi iyo maamulka gobalka Sh/hoose.
HALKAAN KA DHAGEEYSO HADALKA GUDOOMIYE SIIDII
Wixii warkaan kusoo kordha kala soco wararkeena dambe Insha Allah.